Anyị na-enyocha Amazon Fire Stick TV, ihe na-atọ ụtọ karịa Chromecast | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-enyocha Amazon Fire Stick TV, ihe na-atọ ụtọ karịa Chromecast
Miguel Hernandez | | Emelitere na 17/02/2020 12:15 | General, Nyocha
Smart TV na-arịwanye elu n'ụlọ anyị niile. Ọbụna na ndị ahụ, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-anaghị ejedebe obi ụtọ na ohere nke ngwaọrụ ndị a, na ọ bụ na ewezuga Samsung na Tizen, enwere ọtụtụ ihe mgbochi ndị ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịgụnye Smart TV bara uru n'ezie ka nwere ima elu na tiivi ha.
Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ndị ọrụ ole na ole na-ahọrọ Chromecast na obere gam akporo TV na ebumnuche nke iri ọdịnaya dị ọtụtụ karịa na ime ụlọ ha. Amazon, nke dị na oge ọ bụla, yana agbanyeghị na o nweela ngwaọrụ nwere ebumnuche yiri ya, kpebiri iwepụta izu ole na ole gara aga Amazon Fire TV Basic Edition, obere ngwaọrụ nke na-etinye ike niile nke njikwa mgbasa ozi. Na Actualidad Gadget anyị alaala ịrụ ọrụ ma anyị ga-agwa gị gbasara ahụmịhe anyị na Amazon Fire TV Stick Basic Edition, nke hapụworo anyị nnukwu mmetụta.
Anyị ga-agbaso usoro nyocha nke anyị na-agbaso mgbe niile, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ụfọdụ ngalaba m na-enyefe gị ka ị gafere na ndeksi na njikọta kpọmkwem. Enweghị oge ọzọ anyị na-aga ebe ahụ nkọwa nke ngwaahịa ahụ.
1 Nka na ụzụ: Ihe ngwaike na arụmọrụ
2 Design: Minimalism na ịba uru site ọkọlọtọ
3 Nkwakọ ngwaahịa na ngwa: Iwu nke ọdịiche dị na ya
4 Mbido: All dị njikere ịga na nkwụnye
5 Jiri ahụmịhe: Oke ole na ole na ọtụtụ nkasi obi
Nka na ụzụ: Ihe ngwaike na arụmọrụ
Anyị bụ ndị, dị ka ị maara nke ọma, tupu ihe HDMI osisi na-agụnye ike n'ime. Ọ na-eme nke a site na iji igwe na-abụghị ndị ụka, arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ala arụpụtara MediaTek na inye ọsọ nke 1,3 GHz, dị nnọọ ezu maka ọrụ gị, anyị anaghị eche ihu na ngwaahịa na-adịghị mma. GPU ngwaahịa a na-agakwa njedebe, Mali 450 Mp4 iji rie ọdịnaya nke ọtụtụ na ntakịrị ihe. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọ nwere ebe nchekwa ya RAM Ebe ọ bụ na ọ na-agba ọsọ Android, ọ na-emefu naanị 1 GB Na mkpokọta, ya mere o doro anya na sistemụ arụmọrụ kachasị mma, ma ọ bụghị na ezughị oke ngwaike ga-ahụ nke ọma iji, anyị na-atụ anya na ha abụghị.
Banyere nchekwa anyị nwere 8 GB na mkpokọta, ọ bụghị gbasaa ma dịrị ihe dịka 6 GB maka onye ọrụ mgbe ị gbasịrị sistemụ arụmọrụ yana ngwa ndị obodo. Anyị na-ele anya na koodu vidiyo na usoro:
Video: H.264 1080p30, H.265 1080p30; Audio: AAC-LC, HE-AACv1 (AAC +), HE-AACv2 (eAAC +), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM / Wave, Vorbis, AMR-NB , AMR -WB; Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP
Audio: Dolby Audio, 5.1 gbara ụda gburugburu, stereo ọwa 2 na HDMI 7.1 akara ngosi ọdịyo gafere.
Anyị nwere ntakịrị ihe ị ga-ekwu na ọkwa teknụzụ, anyị hapụrụ njikọ ha WiFi ọrụ na n'ezie Bluetooth 4.1 ma ijikwa ngwaọrụ na ịgbasa ọdịyo n'etiti atụmatụ ndị ọzọ. N'ọnọdụ anyị, anyị enwebeghị ike ịme ka ọ rụọ ọrụ na netwọkụ WiFi 2,4 GHz, ihe ị ga-echebara echiche.
Design: Minimalism na ịba uru site ọkọlọtọ
Anyị enweghị ike ịtụ anya ọtụtụ ihe na ọkwa ahụ, ma ọ bụ n'ezie na anyị na-eche ngwaahịa a kara aka zoo n'azụ telivishọn. N'ihi ya anyị nwere 119 x 40,4 x 13,8mm na nha maka ngụkọta nke gram 56, fechaa ma dị mfe iji. Ebe ọ bụ na ọ nweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ, a na-ewu ya na ngwongwo plastik na-acha uhie uhie, na-echekwa ọzọ ka anyị na telivishọn anyị na-ahụghị ya, ọrụ Amazon na nkebi a bụ ihe ezi uche dị na ya, ma e wezụga eziokwu ahụ na ọ naghị abụkarị nzọ site na ihe adịchaghị Maka ngwaahịa gị, anyị chere na ebumnuche ịchekwa ma gbanwee ọnụahịa ahụ, anyị ghọtara ma jaa nke ahụ. Ọ bụ osisi dị mfe nke nwere nwoke HDMI n'otu njedebe na njikọ microUSB n'otu akụkụ. N'ezie m gaara aghọta karịa na HDMI dị n'akụkụ nke ọzọ, mana ị ga-anụ agba ndị ahụ. N'ime otu ntọala anyị hụrụ akara ngosi Amazon na nnukwu ọchị ọchị ya, ọ dịghị ihe ọzọ.
Nkwakọ ngwaahịa na ngwa: Iwu nke ọdịiche dị na ya
Otu n'ime ihe kacha emetụta ihe ịzụta gị bụ na ọ bara uru jiri iwu gị, bọtịnụ ziri ezi iji mee ngwa ngwa na ngwa ngwa site na njirimara onye ọrụ ya ma wuo ya n'otu ihe ndị ahụ dị ka mkpisi ahụ, zuru ezu, obere ma ọ gaghị abụ ihe mgbochi na tebụl dị n'akụkụ. N'otu aka ahụ o nwere a HDMI nkwụnye / extender maka ndị na-enweghị ike ịnweta jackMI HDMI n'ụzọ dị mfe, nke ga-eme ka njikọ dị mfe. N'otu aka ahụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ telivishọn na-enye ike zuru oke iji rụọ ọrụ ngwaọrụ ndị a, Amazon kpebiri itinye nkwụnye ntanetị (chaja USB dị mfe) ka ị ghara inwe ọchịchọ ma ọ bụ ịzụta ngwaahịa iche iche. Nke bụ eziokwu bụ na Amazon na-eche maka ihe niile dị na ngalaba a ma chọọ ịnye gị ngwugwu zuru oke.
Nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ nke ọnụ ọchị, a ụdị isiike kaadiboodu akpa na-emepe n'otu nsọtụ, fọrọ nke nta e mere na-na ihe ọ bụla shelf ị pụrụ iche n'echiche. Emere ihe niile n'ime "igbe" ka ha dabaa nke oma.
Mbido: All dị njikere ịga na nkwụnye
Ma ọ bụrụ na anyị akara ya "dị ka onyinye", anyị Amazon akaụntụ ga-arụnyere na usoro n'ọdịnihu, Ya mere, anyị agaghị enwe ihe karịrị plọg na ngwaahịa ahụ ma ọ ga-amalite iduzi anyị site na usoro nrụnye yana ibudata ngwa anyị ma debanye aha ọdịnaya site na ụlọ ahịa Amazon. Nke a nwere isi ihe ị rịba ama, ebe ị maara nke ọma na ọ dakọghị na Playlọ Ahịa Google, ma ọ dịkarịa ala, mana mana anyị ga-agwa gị ma emechaa, ị nwere ike itinye faịlụ ".APK" n’enweghi oke nsogbu. Nchịkọta nhazi ga-enye anyị ohere ịgbakwunye usoro nchịkwa maka vidiyo egwuregwu na Ihe ntanetị Bluetooth na ụmụ oke na-akwado mmekọrịta, ọ bụ ezie na anyị na-ekwusi ike na iwu ahụ ezughị oke.
Jiri ahụmịhe: Oke ole na ole na ọtụtụ nkasi obi
Onye ọrụ interface bụ ụdị nke ihe gam akporo TV, ọ e mere na-enwe ike ịnyagharịa ngwa ngwa na mfe site na gị ime. Anyị ga-enwe Start menu ebe anyị nwere ike ịnweta ngwa ngwa ahụ, Usoro Otu ebe anyị ga-ebudata ngwa nke anyị site na ụlọ ahịa Amazon yana n'ikpeazụ menu Ntọala na ihe ị ga-atụ anya ya.
Dị ka ị maara nke ọma, Fire OS dabere na gam akporo mana ọ naghị akwado ụlọ ahịa Google Play. Ihe ozo gha eme ka ntinye nke ngwa ma chọgharịa na webụ rue ibudata .apk nke masịrị anyị, otu a bụ anyị ga-enwe ike ịme Amazon Fire Stick na ngwa nke ụdị Movistar +. O di nwute, emeghi ngwa ndi a ka ha na FireOS rụọ ọrụ, ya mere na-enweghi ogwe Bluetooth anyị ga-enwe oge isi ike ịgagharị ngwa ahụ, ebe ọ bụ na ime agaghị ekwe anyị.
Dị ka ị maara nke ọma, dị n'ime Full HD 1080p na 30 Fps Ọ bụ ihe kachasị nke Amazon Fire Stick Basic Edition ga-enye anyị, ezi uche dị na ngwaọrụ nke heruola € 29,99 maka ndị ọrụ Amazon Prime en EGO A. Ọ bụrụ na ị na-achọ nke kacha na arụmọrụ na mma, ị kwesịrị ị na-ahọrọ maka mpi, ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ, ma na-enweghị obi abụọ Amazon Fire Stick TV bụ otu nzọụkwụ n'ihu Google si Chromecast. Maka ojiji nke Movistar +, Amazon Prime Video, Spotify, Netflix na ngwa ndị yiri ya karịrị nke ahụ, karịchaa na-atụle ọnụahịa dị egwu.
Minimalism na nha
Njikwa onwe gị
Na-enweghị Google Play
Ngwaọrụ dị na nsọtụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anyị na-enyocha Amazon Fire Stick TV, ihe na-atọ ụtọ karịa Chromecast
SPC na-agbanwe agbanwe na mbipụta ya pere mpe nke El Dios de los Tres mere
Ockel Sirius A Pro, ike ọzọ maka akpa a miniPC